गाउँपालिकाकै खर्चमा कोरोना परीक्षणको प्रवन्ध गरेका छौँ, युवालाई शीपअनुसारको काममा लगाउछौँ « Mechipost.com
प्रकाशित मिति: १३ असार २०७७, शनिबार २१:२८
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारीले पुनः एक पटक नेपालमा तीन तहका सरकारको औचित्य पुष्टि गरेको छ । त्यसमा पनि सबैभन्दा तलको सरकार स्थानीय सरकार महामारीसँग जुध्न तथा महामारीबाट उत्पन्न परिस्थितिलाई सामान्य बनाउँदै विकास, स्थानीयवासीको आयआर्जन अभिवृद्धि र आधारभूत सेवा सुविधाको विस्तार एवम् प्रवद्र्धनमा लाग्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
अहिले पनि स्थानीय तहहरु कोरोना भाइरसको महामारीको त्रास र लकडाउनबाट उत्पन्न परिस्थितिसँग जुधिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा स्थानीय सरकारको नेतृत्वले भोग्नुपरेको जटिलता के–कस्ता छन् ? नागरिकलाई संक्रमणबाट बनाउन भएका पहल के–के हुन् ? यी पहलहरुबाट के–कस्ता उपलब्धिहरु भइरहेका छन् ? भन्ने लगायत विषयमा याङवरक सन्देश का लागि रवीन्द्र काफ्ले र नेत्रप्रसाद कोइरालालले याङवरक गाउँपालिकाका अध्यक्ष लेखनाथ घिमिरेसँग कुराकानी गरेका छौँ । प्रस्तुत छ गाउँपालिका अध्यक्ष घिमिरेसँगको कुराकानीको सम्पादित अंश:
कोभिड–१९ संक्रमणको महामारी र लकडाउनको अवस्थासँग याङवरक गाउँपालिका कसरी जुधिरहेको छ ? महामारी र लकडाउनले गाउँपालिका भित्र परेको प्रभाव के हो ?
– विश्व महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)सँग जुध्न सरकारले जारी गरेको लकडाउन धेरै नै महत्वपूर्ण छ । यो महामारी र संकटको अवस्थासँग याङवरक गाउँपालिका समेत नराम्ररी प्रभावित भएकै छ । महामारीविरुद्ध हाम्रो गाउँपालिकाको सबै संयन्त्र क्रियाशील छ । सुरुमै हामीले याङवरक—१ च्याङथापूमा हेल्पडेस्क स्थापना ग¥र्यौँ । याङवरक भारतसँग सीमा जोडिएको हुनाले सीमा क्षेत्रबाट हुने आवागमनलाई नियन्त्रित र सचेततापूर्वक बनाउने प्रयास थाल्यौँ । सीमा क्षेत्रबाट संक्रमण फैलन नदिन उक्त क्षेत्रमा सचेतना समेत फैलाइयो ।
हामीले जिल्ला स्थित संकट ब्यवस्थापन केन्द्र सहितका समितिहरुले गरेका निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्दै आएका छौँ । जसअनुसार हामीले सबै वडामा क्वारेन्टाइन निर्माण ग¥र्यौँ । क्वारेन्टाइनमा जिल्ला बाहिरबाट गाउँपालिका आउनेहरुलाई राख्यौँ । गाउँपालिकाले सबै खर्चको समेत प्रवन्ध गरेर काम गर्दै आइरहेको छ । क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरुलाई सहज बनाउन आवश्यक प्रवन्ध ग¥र्यौँ । संकट समाधान तथा महामारीसँग जुध्न हामी निरन्तर क्रियाशील हुँदै आएका छौँ । र यहाँ आइपुगेका छौँ ।
याङवरक गाउँपालिका लगायत कतिपय स्थानीय तहहरुले कोरोना भाइरस संक्रमण पत्ता लगाउने आरडीटी तथा पीसीआरका किट खरिद गरिरहेको भन्ने पनि सुन्नमा आएको छ । याङवरक गाउँपालिकाले के कति किट खरिद गरेको छ ? हालसम्म कति परीक्षण भएका छन् ?
– हामीले किटको ब्यवस्थाका लागि सुरुआतदेखि नै चासो दिएका हौँ । हामीलाई संघीय सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री एवम् पाँचथरबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य वसन्तकुमार नेम्वाङले ९० थान आरडीटी किट उपलब्ध गराउनुभएको थियो । हामीले उहाँलाई मुरीमुरी धन्यवाद पनि दिएका थियौँ र धन्यवाद दिन्छौँ ।
त्यसले मात्रै नपुगेर स्वास्थ्य कार्यालय पाँचथरबाट थप २० वटा किट ल्याई परीक्षणको प्रवन्ध गरिएको थियो । अहिले हामीले चाहीँ स्वाब परीक्षणका लागि भीटीएन किट खरिद गरेका छौँ । त्यो हाम्रै लगानीबाट खरिद भएको हो । त्यसले हालसम्म कोरोना भाइरसको महामारीमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, जनप्रतिनिधि लगायतको स्वाब परीक्षण गर्ने तयारी गरेका छौँ । त्यसबाहेक अब भारतबाट आउनेहरुको मात्रै स्वाब परीक्षण गर्ने हाम्रो तयारी छ ।
अहिले कोभिड–१९ संक्रमणको महामारी र लकडाउनले ठूलो युवा शक्ति गाउँमा आएका छन् । याङवरक गाउँपालिका कृषि उपज उत्पादन, पशुपालन, लघु तथा घरेलू उद्योग स्थापना र सञ्चालनका दृष्टिले महत्वपूर्ण र सम्भावनायुक्त क्षेत्र हो । अहिले नयाँ बजेट पनि निर्माण भइरहेको छ । त्यसरी गाउँ भित्रिएको युवा शक्तिलाई परिचालन गर्ने के कस्ता योजनाहरु बनाउँदै हुनुहुन्छ ?
– हामीले याङवरक गाउँपालिकामा जति पनि युवाहरु बाहिरबाट आउनुभएको छ, युवा शक्तिलाई याङवरक गाउँपालिका भित्रै परिचालन गर्नका निम्ति युवा सशक्तिकरणको कार्यक्रम बजेटमा राख्दैछौँ । त्यो बजेटले मात्रै उहाँहरुलाई प¥याप्त पुग्दैन् । हामीले हाम्रै गाउँघरमा रहेको कृषिमा उहाँहरुलाई जोड्ने योजना बनाएका छौँ । कृषिमा विभिन्न क्षेत्रहरु छन् । फलफूल तथा नगदेवाली उत्पादनको राम्रो सम्भावनामा पनि छ यहाँ ।
बाख्रापालन, गाइपालन, माछापालन, चौरीपालन, भेडापालनमा समेत यहाँ प्रशस्त सम्भावनाहरु छन् । हामीले विशेषत उहाँहरु जुन–जुन वडामा आउनुभएको छ, उहाँहरुलाई तत वडामा केही ब्यवस्था गर्छौँ । युवा स्वरोजगार कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट समेत समेट्छौँ । जति पनि युवा भित्रिनुभएको छ, उहाँहरुलाई सम्मानपूर्वक उहाँहरुको पेशा र शीपअनुसारको काम दिने प्रयास गर्छौँ । याङवरक गाउँपालिकाले नै त रोजगारी दिन सक्दैन् । तर उहाँहरुलाई काममा ब्यवस्थित गरेर चाहीँ लैजान्छौँ । जसले गाउँपालिकाको समृद्धिको मार्गमा समेत सघाउ पुग्ने हाम्रो विश्वास छ ।
गाउँपालिकाले लकडाउन प्रभावित ४०० बढी परिवारलाई राहत दिइसकेको छ । अब प्रभावित हुने परिवारलाई गाउँपालिकाले कसरी राहत दिन्छ ? श्रममा लगाई रोजगारी र राहत पनि दिने तथा विकासका काम पनि अघि बढाउने योजना छ कि छैन ?
– हामीले वडाले सिफारिस गरेका परिवारहरुलाई राहत वितरण गरेका हौँ । प्रत्येक वडामा अतिप्रभावितमध्ये ५० परिवारलाई राहत दिने हाम्रो योजना थियो । वडाको सिफारिसका आधारमा राहत वितरण गरिएको थियो । निम्न वर्ग, दैनिक ज्यालादारी गर्ने परिवारलाई राहत वितरण गरिएको थियो । त्यो राहतले मात्रै केही नहुँदो रहेछ । त्यसपछि गाउँपालिका अलि अघि बढेर निर्णय ग¥यो ।
उक्त निर्णयले राहत थपिएको छ । हाम्रा योजनाहरुमा श्रम गर्ने परिवारलाई श्रम गर्ने अवसर दिई उचित पारिश्रमिक राहत स्वरुप दिइएको छ । थर्पू क्याम्पस, वडा नं. ६ को खेलमैदान, ओयाम स्थित गुप्तेश्वर माध्यमिक विद्यालय, च्याङथापू स्थित विष्णु माध्यमिक विद्यालयका भवन निर्माणमा आवश्यक सामग्री जुटाउन उहाँहरुलाई परिचालित ग¥यौँ । परिचालित गरेपछि राहत भन्दा पनि श्रम प्रभावकारी र महत्वपूर्ण भएको पाइयो ।
राष्ट्रिय गौरबको आयोजना पुष्पलाल (मध्यपहाडी) लोकमार्ग याङवरक गाउँपालिकाबाट सुरु हुन्छ । लकडाउन र संक्रमणको महामारीले यो आयोजनाको निर्माणमा कस्तो प्रभाव परेको छ ?
– हाम्रो गाउँपालिकाको चिवाभञ्ज्याङबाट सुरु भएर पुष्पलाल (मध्यपहाडी) लोकमार्ग अघि बढेको छ । यो सडक हाम्रो गाउँपालिकाको विकास र जनजीवनको मेरुदण्ड हो । यो सडकको अनुगमन र नियमन हामीबाट हुन नभएपनि हामीले यसको निरन्तर र द्रूत निर्माणको पहल हामीले गरिरहेका छौँ ।
मैले पहल गरेर चिवाभञ्ज्याङमा पुष्पलाल पार्क बनाउन बजेट समेत प्राप्त भएको छ । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयले बजेट छुट्टयाई दिएको छ । यो सडकको निर्माण पूरा गर्ने, सडकको नियमित रेखदेख र अनुगमन गर्ने, यो सडकलाई उपयोग गरी समृद्धि हाँसिल गर्ने लक्ष्यमा हामी निरन्तर लागिरहेका छौँ ।
अझै विभिन्न मुलुकबाट नेपालीहरु नेपाल ल्याउने क्रम चलिरहेको छ । भारत सहित विदेशबाट आउनेहरु अब सिधै गाउँपालिकासम्म भित्रेर क्वारेन्टाइनमा बस्ने अवस्था समेत निर्माण हुनसक्छ । यसले स्थानीय स्तरमा संक्रमण फैलने खतरा बढ्दै गएको छ । अब सबै पक्षको स्वास्थ्य सुरक्षालाई कसरी प्रभावकारी बनाउनुहुन्छ ?
– विदेशमा भएका दाजुभाई दिदीबहिनीहरु आफ्नो मातृभूमिमा आउनु स्वभाविक छ । हामीले विदेशबाट आउने सबैलाई स–सम्मान क्वारेन्टाइनमा राख्ने, पीसीआर परीक्षण गर्ने र नेगेटिभ रिपोर्ट आउनेहरुलाई घर पठाउने हाम्रो तयारी छ । यस क्रममा संक्रमणको खतरामा पर्ने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, जनप्रतिनिधि लगायतको समेत पीसीआर परीक्षण गरिनेछ ।
हामीले सकेसम्म संक्रमण फैलन नदिने प्रयत्न गर्नेछौँ । त्यसैका लागि ४ सय थान भीटीएन किट खरिद गरिएको हो । यस्तै एम्बुलेन्स तयार अवस्थामा राख्ने हाम्रो तयारी नै छ । हामीले झण्डै २० लाख चालु आर्थिक वर्षमा खर्च गर्छौँ भने आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३० लाख रुपैयाँ बजेट महामारी रोकथाममै छुट्टयाइएको छ ।
लकडाउन र कोभिड–१९ संक्रमणको महामारीले चालु आर्थिक वर्षमा सञ्चालित विकास योजनाहरु के–कस्तो असर परेको छ ?
– कतिपय योजनाहरु लकडाउन अगाबै सम्पन्न भएका थिए भने कतिपयलाई लकडाउनकै विचमा समेत अघि बढाइएको छ । कतिपयको निर्माण कार्य जारी छ । चालु आर्थिक वर्षमा सकेसम्म सबै योजना सम्पन्न गर्ने संकल्पका साथ हामी लागिपरेका छौँ ।
यसमा उपभोक्ता, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि सबैलाई परिचालित गरिएको छ । कोरोनाका कारण धेरै समस्याहरु भने आएका छन् । आर्थिक मन्दीका समस्याहरु पनि देखा परेका छन् । राजश्व संकलनमा समेत प्रभाव परेको छ ।
आवधिक योजनालाई टेकेर नयाँ आर्थिक वर्षका लागि नयाँ के–कस्ता योजनाहरु ल्याइएका छन् ?
– धेरै नयाँ योजनाहरु बनाइए छन् । गाउँपालिकावासीको आवश्यकताअनुसार नै सबै योजनाहरु छनौट सञ्चालन हुनेछन् । विषयगत समितिमा आगामी आर्थिक वर्षका योजनाहरु छलफलका क्रममा छन् । हामीले स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र पशुपालनमा हाम्रो विशेष ध्यान केन्द्रीत भएको छ । कोभिड–१९ को महामारीले हामीलाई स्वास्थ्य क्षेत्रको सवलीकरण गर्न पाठ सिकाएको छ भने महामारीका कारण उत्पन्न परिस्थिति र गाउँपालिकावासीको आयआर्जन अभिवृद्धि एवम् जिविकोपार्जनका लागि कृषि र पशुपालनको प्रवद्र्धन आवश्यक ठानिएको हो ।
यस्तै याङवरक गाउँपालिकाले सडक गुरुयोजना निर्माणको काम समेत अघि बढाएको छ । अब सडकलाई ब्यवस्थित र बाह्रै महिना सञ्चालनयोग्य बनाउन गुरुयोजना निर्माणको तयारी गरिएको हो । गुरुयोजनाले सडक निर्माण, मर्मत र स्तरोन्नतिमा ठोस कार्यादेश दिने हाम्रो अपेक्षा छ । केही महत्वपूर्ण डीपीआरका योजनाहरु समेत अघि बढाइदैछ ।
त्यसमा हाम्रै गाउँपालिकाबाट सुरुआत भएको पुष्पलाल (मध्यपहाडी) लोकमार्गको सुरु विन्दू चिवाभञ्ज्याङमा पुष्पलाल पार्क निर्माण गर्ने तथा ५२ मौलो निशान धाम याङवरक पोखरीलाई ब्यवस्थित गर्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउन लागिएको हो । (याङवरक सन्देश मासिकबाट साभार)